“တန်ဆောင်မုန်းသူ” ~ White Angel
9:47 AM အဖြူရောင်နတ်သမီး 52 comments
ဟုဆိုထားသော တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်၊ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ကျီးမနိုးပွဲများကို ရိုးရာအစဉ်အလာမပျက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကို ဘုရားမပွင့်မီအခါက ဂြိုဟ်နက္ခတာရာများကို အဆိုးရသော နတ်ဘုရားများအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကြတ္တိကာပွဲဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
“တန်ဆောင်”ဆိုသည်မှာ မီးရှူးမီးတိုင်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၍ “ပုန်း”မှာ မီးပန်းများထွန်းလင်းတောက်ပစေခြင်း ဖြစ်၍ “မီးရှူးမီးတိုင်တို့ကို တောက်ပစေသောလ”ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ လောကနီတိဆရာက “သရဒံ ဥတုကာလနံ ပဓာနံ”(လ တကာတို့တွင် တန်ဆောင်မုန်းလသည် အမြတ်ဆုံးလဖြစ်သည်)ဟု ရေးစပ်ခဲ့ဖူးသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလသည် ဆီးနှင်း၊မြူ၊တိမ်၊သူရိန်၊မီးခိုးဟူသော ညစ်မျိုး(၅)ပါး ကင်းစင်၍ရာသီဥတုသည် အလွန်အေးမြကြည်လင်သော လပင်ဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်တိုင်ညသည် ဆေးပေါင်းခသောညဖြစ်သည်ဟု ယူဆပြီး မယ်ဇလီဖူးများကို သုတ်၍စားသည့်ဓလေ့မှာ ယ္ခုအချိန်ထိရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ခဝဲပန်းများပွင့်လန်းသော တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ဗုဒ္ဓခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှ စ၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ (၁)လအတွင်း မိမိကထိန်ခင်းလိုသော ရက်ကိုရွေးချယ်၍ မိမိတို့နှင့်ပတ်သက်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် အလှူပေး၍ ကထိန်ပွဲများကိုကျင်းပလေ့ရှိသည်။
“အလှူမှာ ကထိန်၊ ဆွမ်းမှာ ပိဏ်၊ ရတနာမှာ စိန်၊ကျောင်းမှာ သိမ်” ဟူသော စကားကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိထားကြမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ထိုသို့ကထိန်သင်္ကန်းကိုကပ်လှူသော သူတို့သည် “အနှောင်အဖွဲ့မှကင်းလွတ်ခြင်း”ဟူသောအကျိုးတရားများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်လိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတိုင်း သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၁)ရက်နေ့မှစ၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ တလအတွင်းမိမိကထိန်ခင်းလိုသော ရက်ကိုေ၇ွးချယ်၍ မိမိတို့ကိုးကွယ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင် ဆွမ်း၊ ထမင်း၊ ဟင်းများကိုချက်ပြုတ်၍ ရဟန်းသံဃာတော်များအား အာရုံဆွမ်း ကပ်လှူလေ့ရှိသည်။
အဲဒီအလှူဒါယိကာများထဲတွင် ကျမ၏မေမေလည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ မေမေပြောပြချက်အရ ကျမတို့ကိုးကွယ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အလှူလုပ်ရန် ညဘက် ဆွမ်း၊ ထမင်း၊ ဟင်းများချက်နေစဉ် ကျမကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရသည့် မေမေမှာ ဗိုက်နာလာသဖြင့် ဆေးရုံသို့ပြေးခဲ့ရပြီး နောက်တနေ့(တနင်္ဂနွေ)နေ့နံနက် အာရုံတက်အချိန်တွင် ကျမကိုချောမောစွာ မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။
လောကကြီးထဲကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ ဖေဖေဦးစိန်မောင်၊ မေမေ ဒေါ်အုန်းကြည်တို့၏ တဦးတည်းသော သမီး ဖြစ်သည့် ကျမအတွက် ဖေဖေကိုယ်တိုင် နာမည်ရွေးပေးခဲ့ပုံမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား ဖြစ်သည့်အတွက် “အ” “ဥ”အက္ခရာများကို ဦးစားပေး၍ စဉ်းစားခဲ့ရာဝယ် ရာဇဝင်ဇာတ်တော်များထဲမှ တနင်္ဂနွေအမည်ဖြင့်စသော မင်းသမီးတပါး၏ အမည်ဖြစ်သည့် “ဥမ္မာဒန္တီ” အမည်၏ ရှေ့နာမည်“ဥမ္မာ” နှင့် ဖေဖေ့အမည် “စိန်မောင်” ကိုပေါင်းစပ်ကာ “ဥမ္မာစိန်မောင်” ဟု အမည် ကင်ပွန်းတပ်ပေးခဲ့သည့်နေ့က “ယနေ့က စလို့ သမီးလေး“ဥမ္မာစိန်မောင်”ဟာ “ဥမ္မာဒန္တီ” မင်းသမီးကဲ့သို့ အဆင်းလှခြင်း၊ အချင်းလှခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာထက်မျက်ထူးချွန်ခြင်း၊ “လူမြင်လျှင် ချစ်ခင်ပါစေ...အသံကြား သနားပါစေ” ဟူသော ဆုနဲ့ပြည့်စုံပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးသော၊ ဘာသာတရားကိုမမေ့သော သမီးလေးဖြစ်ပါစေ...လို့ ဖေဖေနဲ့ မေမေတို့က ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်”..ဆိုသည့် မိဘ(၂)ပါး၏ ကျမအပေါ်ထားရှိခဲ့သည့် ဆုတောင်းမေတ္တာကြောင့် ကျမဖြတ်သန်းလာခဲ့သော ဘဝတွင် အတိုက်အခိုက်များရှိပါသော်လည်း လူချစ်လူခင်ပေါများခြင်း၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများစွာကို သင်ယူလေ့လာခွင့်ရရှိခြင်း၊ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝခြင်း၊ အနာရောဂါကင်းရှင်းခြင်း၊ ရောက်ရာအရပ်တွင် ကူညီမည့်သူများနှင့် တွေ့ခြင်း၊ စသည့် ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
မြင့်မြတ်လှသည့်တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကျမကိုဖွားမြင်ပေးခဲ့သော မေမေ၊ကျမကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ
်ဖြစ်အောင် နည်းလမ်းပြပေးခဲ့သောမေမေ၊ ဝမ်းမှကျွတ်ကတည်းက ကျမကိုအလှူဒါနနှင့်
မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောမေမေနှင့် အတိတ်နမိတ်ကောက်၍ နေ့သင့် နံသင့် လှပသော အမည်လေးနှင့်တကွ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များကို ဘဝတသက်စာပေးခဲ့သော ဖေဖေတို့အား ကျမ၏မွေးနေ့သို့ရောက်တိုင်း ရဟန်းသံဃာတော်များအား ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပြီး ကျမပြုခဲ့သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကို မိဘ(၂)ပါးအား အမျှပေးဝေပါသည်။ ရောက်ရာအရပ်မှ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ။ ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုပါလျှင် “နောင်ဖြစ်လေရာ လူ့ဘဝများ ရှိခဲ့ပါလျှင် ဖေဖေ မေမေတို့ရဲ့ သမီးသာ ဖြစ်ပါရစေ..”.။
စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း စားဖွယ်သောက်ဖွယ် အစုံအလင်နှင့် တည်ခင်းဧည့်ခံရင်း နိုဝင်ဘာလ(၁၉)ရက်(သောကြာ)နေ့မှာကျရောက်တဲ့ ကျမရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကို ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲကြပါစို့....။
MOET ရှန်ပိန်လေး တယောက်တခွက်နဲ့ အရင်ဦးဆုံး “ချကွာ” ရအောင်နော်...
ANGEL TIP COCKTAIL
ANGRY PIRATE COCKTAIL
အိပ်အပြန် CYPRUS AIRWAY က တာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်
အိမ်အပြန်လက်ဆောင်... WHITE ANGEL CUP
THANK YOU FOR COMMING......XXX
ရုံးဆင်းခါနီး ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန် ရောက်လာမိတာ ဒုက္ခကိုရောက်ရော အစ်မရယ်........ :P
ခွန်ကကဗျာမရေးတက်လို့ မပို့ပေးနိုင်တာ စိတ်မရှိပါနဲ့နော်...
ပျော်ရွင်ကြည်နူးဖွယ်ရာ မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ :)
ဒီနေ့တော့ ၀ါးတီးတွေဆက်နေပြီ။ အခုပဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပြန်လာတယ်။ မွေးနေ့ရှင်ကျေနပ်အောင် စားလိုက်ဦးမယ်...ပကျွတ်..ပကျွတ်...ပကျွတ်။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် လှူနိုင်၊ ကျွေးနိုင်ပါစေဗျားးး။
ံHappy Birthday ပါမနတ်သမီးရေ မွေးနေ့ လက်
မြတ်မင်္ဂလားမှာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ ပြဘ့်ဝပါစေဗျာ
တောက် တကယ်ဘဲမစားရတာ နာသကွာ :D
(ခ)မနမ်းသည်။ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွါတိုင်
အမျိုးဂုဏ်၊ဇာတိဂုဏ် ဆောင့်လေမျိုးနွယ်။ ကျင်ဝ့တ်ငါးဖြာတို့နှင့် ညီညွတ်သော.........
ဘ၀ပန်းတိုင် မယိမ်းယိုင်ပဲ လျှောက်သောလမ်းများ
အဖြူရောင် သူငယ်ချင်းနတ်သမီးချောချောလေးရေ... အစားတွေက စားချင်စရာတွေချည်းဘဲ... ရှန်ပိန်လေးကလဲ မြည်းချင်စရာ... မွေးနေ့ကိတ်လေးကလဲ မစားရက်လောက်အောင်လှတယ်.... လေယာဉ်လက်မှတ်ဘိုးမတတ်နိုင်တော့ သွားရည်တွေဘဲကျပြီး ပြန်သွားတယ်.... လိုရာဆန္ဒ မှန်သမျှ ပြည့်ဝပါစေလို့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့မှသည် နောင်မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာတွင်လည်း ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ နေ့ရက်တွေကိုသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတတယ်နော်... စာချင်တာလေးတွေ တ၀ စားသွားပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ ညီမလေး အဖြူရောင်နတ်သမီးရေ..
သတိတရ ချစ်ခင်စွာနဲ့ အရောက်လာခဲ့ပါတယ်နော်..
Happy Birthday ပါ နတ်သမီးလေးရေ
ရုပ်ကလေးက လှသလို ကျွေးထားတာတွေကလည်း တကယ့်ကို စားချင်စရာ ရှယ်ဘဲနော်
ခုတော့ တကယ်မစားရတာ စိတ်မကောင်းဘူး
ဒါပေမဲ့ wedding ကျရင်တော့ တကယ်စားရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..
ရှန်ပိန်လေးနဲ့ ချကွာ လုပ်ပြီး နတ်သမီးအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်း အများကြီး တောင်းသွားပေးတယ်..
နေ့ရက်တိုင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေအားလုံး ပြည့်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
နတ်သမီးပြထားတဲ့ ပုံတွေထဲက ဟင်းတစ်မျိုးကို အရမ်းသဘောကျသွားပြီး သိမ်းထားလိုက်တယ်
ဆုတောင်းတော့ မေးနဲ့ပို့လိုက်ပြီ..။ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အကုန်
ဝက်နံရိုးကြော်၊ဂဏန်းပေါင်းနဲ့ အဲ....ယမကာတွေ အကုန်လုံးပဲ....:)။
အခု အလုပ်ပြီးလို့ မွေးနေ့ပွဲလေးကို လာပါတယ်
စားစရာတွေကိုကြည့်ပြီး ဗိုက်အရမ်းဆာတာနဲ့ အ၀စားသွားတယ်
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေ
မေးလ်ကနေ မွေးနေ့ သီချင်းလေးရဲကုတ်ပို့ထားတယ်
တက်ရောက်ပါသည်.... အာလူးစားသူတွေရဲ့ နိုင်ငံမှာ အဆင်ပြေပါစေ....
နောက်ကျနေ လို့ ကျန် ပါတော့မလား လို့ ဗျာ အဟဲ အခုတော့ အပြည့်ကျန်သေးတယ် တော်သေးတာပေါ့ ကိုမိုး တို့ ပါဆယ် ထုတ် မသွားလို့
ကဲ နတ်သမီး လေး ကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေ .. ချကွာ ချကွာာာာာာာ.......
အရေးထဲ seesein နဲ့ ဟင်းလုနေရသေး
ညီမ နတ်သမီးလေး....အောက်ကို ရောက်တဲ့အထိ ဘယ်နှစ်ခါ တံတွေးမြိုချမိမှန်းတောင် မသိဘူး...။ ဂလု ဂလု....။ စားချင်စဖွယ်လေးတွေ လှလှပပ ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ထားရှာတဲ့ စေတနာကိုက တော်တော်ကြီးမှန်း သိသာပါရဲ့ ညီမရယ်...။ တန်ဆောင်မုန်းသူလေး မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပြီး လိုရာဆန္ဒ ပြည့်ပါစေနော်...:)
ဗိုက်ပြည့်နေတယ် အမြည်းတွေကောင်းပေမဲ့ သောက်ချင်စရာမပါတော့
ကျွေးထားတာတွေက မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးတာတွေ ဆန်းပေ့ ကောင်းပေ့တွေချည်းပါလား...
မွေးနေ့ရှင်ကလည်း လှလိုက်တာ ငေးယူရတယ်
အသောက်ကလွဲပြီး ကျန်တာတွေ အားလုံးကတော့ ကိုယ့်အကြိုက်တွေချည်းပဲ ဆိုတော့ အကုန်ကို ဆွဲပြီဟေ့။ ဂဏာန်းပေါင်းကိုတော့ ဂဏာန်းမရေနိုင်အောင် ကြိုက်တယ်ကွာ။
** အခုတလော မအားလို့ ရောက်တာ နောက်ကျတယ်။ ဆောတီး **
အင်တာနက်ပေါ်က ပုံတွေနဲ့ပဲ ညာညာကျွေးနေပေမယ့်
ဥမ္မာစိန်မောင်ရေ...."“ဥမ္မာဒန္တီ” မင်းသမီးကဲ့သို့ အဆင်းလှခြင်း၊ အချင်းလှခြင်း၊ ဥာဏ်ပညာထက်မျက်ထူးချွန်ခြင်း၊ “လူမြင်လျှင် ချစ်ခင်ပါစေ...အသံကြား သနားပါစေ” ဟူသော ဆုနဲ့ပြည့်စုံပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးသော၊ ဘာသာတရားကိုမမေ့သော သမီးလေးဖြစ်ပါစေ...လို့ " ဖေဖေမေမေတို့ တောင်းဆုပြုခဲ့သလို ထပ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်...
မွေးနေ့ရက်မြတ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ တန်ဆောင်မုန်းသူရေ...
ဘကျောက်က ပုံပြင်လေး ရေးပြီးပိုံ့ချင်တာ..
e mail လိပ်စာကလဲရှာမတွေ့ဘူး...
တခါက အိုလံပီယာတောင်ကြီးမှာ..Zeus ကျောက် နတ်မင်းကြီးနဲ့ စိုးမြတ် Hera မိဖုယားကြီးတို့ရှိသတဲ့..တနေ့တော့ စိုးမြတ်ဟီရာ ကပြောသတဲ့..."ကိုကျောက်ရယ်..တော့ တောင်ပေါ်ကြီးမနေချင်ပါဘူး..ကျုပ်မှာ မီးသတ်မျှော်စင်ပေါ်နေရသလိုပဲ၊ လေကလဲ တဝှီးဝှီးနဲ့ ပြူတင်းပေါက်ဖက်တောင်ကျောပေးမအိပ်ရဲဖူး..ဝေသာလီဗျိုင်းဖြစ်မစိုးလို့ ..ကျုပ်..Cyprus ကျွန်းသွားမယ်တော်" နတ်မင်းကြီးကျောက်နဲနဲ စိတ်လေသွားတယ်.." မိန်းမရာ ငါ့ခရက်ဒစ်ကက်တွေကလဲ မင်းသုံးလွန်းလို့ လစ်မစ်တောင်ကျော်နေပြီ..အိမ်မှာငြိမ်ငြိမ်နေပါကွာ " လို့ပြောသတဲ့..၊ စိုးမြတ်ဟီရာကလဲ မီးပျက်ညရဲ့ ဘလော့ ကို ဖတ်ထားသူပဲ ဘယ်ရမလဲ.." ဟင့်..ဟင့်.." လို့ မျက်ရည်လဲကျပြလိုက်ရော..နတ်ကျောက်မင်းလဲ မနေနိုင်တော့ဘူး.. အင်း..မဖြစ်ဖူးမဖြစ်ဖူး..ဒီမိန်းမတောင် မကြီးပေါနိုင်ငံက ကဇော် မြှောက်ပေးလို့ လက်ကတီးကြား..ဟိုကတီးကြားက ချွေးတွေစုပြီး အလစ်မှာ ပက်ပြီး ရအောင်ယူထားတာ ချော့ထားမှ လို့ တွေးပြီး "ကဲ..ပါ မိန်းမရာ အခုပဲ အွန်လိုင်းကနေ လိန်ပျံလက်မှတ်ဝယ်လိုက်ပြီ " လို့ ပြောရသတဲ့..၊ ဟော..ဆိုက်ပရပ်လဲ ရောက်ရော တခါ စိုးမြတ်ဟီရာက တရုတ် ဆိုင်မှာ စားချင်ပြန်ရော..နတ်ကျောက်က ခရက်ဒစ်ကဒ်အကြွေးရင်လေးနေတာမို့.." မင်း ကနမော်နမဲ့နဲ့..၊ အဲဒီဆိုင်က လှေခါးက ခလုပ်တိုက်ပြီးမှောက်လဲအောင် လုပ်ထားတာကွ၊ လာစားတဲ့သူတွေကိုလဲ မှန်ကွဲအောင်လုပ်ခိုင်းပြီးအရော်တောင်းနေကြ.မင်းကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ မှန် ၁၀ ချပ်လောက် ကွဲသွားနိုင်တယ်" လို့ ပြောပေမဲ့ '" ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း..အဲဒီမှာ အိုက်စကလင် ဆာတေး စားမလို့ ကြံနေတာကြာပေါ့" လို့ စိုးမြတ်ဟီရာက အမူပိုပို ပြန်ပြောသတဲ့..၊ သူလဲပြောရော နတ်ကျောက်တောင် အဲဒီဆိုင်က တရုတ်မရဲ့ အာတာပူစီ မီးကင်ရွရွကြီး ကြီးကို မျက်စေ့ထဲ ပြေးမြင်သတဲ့..ရှလွတ်... စားသောက်ဆိုင်မသွားခင် beach မှာရေကူးချင်တယ်ဆိုပြီး စိုးမြတ်ဟီရာက ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ရေထဲလဲဆင်းရော..နတ်ကျောက်ကြီးခမြာ အလန့်တကြားဖြစ်သွားသတဲ့..၊ " ဟာ.....မင်း...ဗိုက်ပူ တင်ကားကြီးနဲ့ စင်ကာပူက ဟို ဘလော့ကာ မမ ဝဝကြီးတွေ လို ဖြစ်နေပါ့လား" အဲ လို အားပေးစကားသံလဲကြားရော...စိုးမြတ်ဟီရာအရမ်းဒေါသဖြစ်သွားသတဲ့.."တော် ..ဘာစကားပြောတာလဲ ကျုပ်ဗိုက်ပူနေတာ ရှင့် ကြောင့်..ရှင့်ကြောင့်.." လို့ ပြောပြီး မေ့လဲ သွားလို့ 911 ခေါ်ပြီးဆေးရုံပို့လိုက်တော့ သမီးတော်လေးတပါး ဖွားမြင်သတဲ့..၊ သူ့နာမည်ကို အက်ဖရိုဒိုက်လို့မှည့်ပေမဲ့ လူတွေကတော့ white angle အဖြူရောင်နတ်သမီးလေးလို့ ခေါ်ကြသတဲ့..နတ်သမီးလေးမွေးတဲ့နေ့က....နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တဲ့....
(1)when i see you i will be :D
(2)After :D i will give you white rose posy
(3)After that i will pray you"Be Happy"
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ပါ မမရေ..
အသက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှည်ပါစေ။
happy birthday ပါ အစ်မနမ်း ...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်သလို ဘဝရဲ့ မမေ့နိင်ဖွယ်ရာ နေ့လေးလည်း ဖြစ်မှာပါ။
ဘဝမှာ ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိင်ပါစေ။ စိတ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့ နေ့သစ်တွေတိုင်းကို အားမာန်အပြည့်နဲ့ အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းနိင် ပါစေ။
အပေါ်ကနေ တပွဲချင်းစီကို သဘောကျလာတာ
ကြိုက်တာတွေက မကုန်နိင်ဘူးကို ဖြစ်နေတော့တယ်။
စားကောင်းသောက်ဖွယ်အစုံအလင်နဲ့ မွေးနေ့ပွဲလေး ပါလား..အပြင်မှာဆုံတွေ့ကြရရင် ပိုကောင်းမယ်နော်း)) နတ်သမီးဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပါစေ
မင်္ဂလာ ရှိတဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ခင်ဗျာ။ နှုတ်ဆက်တာ နဲနဲနောက်ကျ ပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ၊။ ပုံ တွေ ကို ကြည့်ပြီး မစားတတ်ပေမယ့် တကယ် မစားရသလိုပါပဲ။း)...
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ တဘ၀လုံး ပျော်ရွှင် ပါစေ...
မင်္ဂလာရှိတဲ့မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ခင်ဗျာ။း)
နှုတ်ဆက်တာနောက်ကျပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ။ မင်္ဂလာရှိ သော မွေးနေ့ရက်မြတ် ဖြစ်ပါစေ။
ချစ်တဲ့သူတွေ ဘဝရဲ့လက်တွဲဖော် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူ
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့မှသည် နောက်နှစ် နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အေးချမ်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့..
မွေးနေ့မဂ`်လာ ၊ ပြုံးပျော်နွဲ .... နွဲ
ကောင်းကင်၌ညွှတ် ၊ ကြယ်စင်ဆွတ်သူ..။
သက်တန့်တွေဆီ ၊ လှမ်းကာချီသူ..။
တို့များတတွေရဲ့ အဖြူရောင် နတ်သမီး ...
မိဘကျေးဇူး ၊ အထူးထူးကို
သမီးလိမ္မာ ၊ ရတနာအနှစ်
နတ်သမီးထံ ကြွင်းကျန်ရစ်စေ .....
....☼ ....☼ ...☼ .
၀မ့်စွေ့ ၀မ့်စွေ့ ၀မ့်ဝမ့်စွေ့
HAPPY BIRTHDAY မနမ်းရေ
ဘ၀မှာ ပျော်ရွင်မှုပေါင်းများစွာ နဲ့ဆုံဆည်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
ကျွေးသမျှတွေ အကုန်စားသွားတယ်...း) ကျေးဇူး..
အဘကျောက်ပုံပြင်ဖတ်ပြီးတော့ ရယ်လိုက်ရတာ ခစ်ခစ်
မမ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် မွေးနေ့လက်ဆောင် ကဗျာ တွေ ပေးချင်ပေမယ့် သမီးက မရေးတတ်ဘူးလေ ဒါကြောင့်ပါ
အစားတွေကတော့ရှယ်ပဲ သမီး လာလည်ရင် အဝ (အဝမှာ ကျွေးလို့မဆိုလိုပါ) ကျွေးရမယ်နော် ဟဲဟဲ
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ လေး ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ
အပေါ်ဆုံးက ဓါတ်ပုံ သိပ်ကြည့်ကောင်းတာပဲ။ မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ဆို ပိုကြည့်ကောင်းတယ် ထင်မိတယ်။
ဟွန် ကွန်မန့်တွေ လာဖတ်တော့ အနော်မန့်ထားတာ ပျောက်နေပါလား။ ပို့စ်တက်တက်ခြင်းလာမန့်ထားတာ အဆင်ပြေတယ်ပြောတာပဲ အခုမတွေ့တော့ဝူး။ ချိတ်ညစ်တယ်။ အဲလို ပြန်ရေးဖို့ စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်စားသွားတယ်ဗျာ။ ပိတ်ရက်က အရှိန်မသေသေးလို့ ထပ်မသောက်နိုင်တော့ဝူးဂျာ။
မမနတ်သမီး မွေးနေ့တိုင်းအခုလို ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပါစေ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်များနှင့်တကွ အနာဂတ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။ ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ် မြှင့်တင်နိုင်သော အမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်ပါစေ။
မမကြီးနော် အွန်စောလေးကို မေ့ထားတယ်။ ကြည့်ပါလား။ နောက်ကျမှဖိတ်စာလာပို့တယ်။ သူများက မကြီးနမ်းအတွက် ကိုရီးယားမိတ် မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်လာတာနော်။ အခု ပရိတ်သတ်အချို့ကပြန်တောင်ကုန်ကျပြီ။ ဖိတ်စာရောက်တာနောက်ကျလို့ကျေနပ်ဘူး။ ဒါပဲ။
(ဆုတောင်းပေးဘူး။ အွန်စောဆုမတောင်းပေးလဲ မမက ၀ပြီးသားလှပြီးသား ကျန်မာပြိးသားမို့ပါ)။
ရီမိုး ကတော့ အမြဲတမ်းကို နောက်ကျနေတာပါပဲ.... အဲဒီ့ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါနော် မမ... :)
ကဗျာကလည်း မရေးတက် စာအရေးအသားကလည်းမကောင်း၊ နောက်ကလည်းကျတက်တဲ့ ရီမိုးရဲ့ မမ အိန်ဂျယ်၊ မွေးနေ့ကို ပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် ဟုတ်?
အဲဒီ့ ပျော်ရွှင်မူ့တွေ အမြဲ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ပြီး စာတွေလည်း အများကြီးရေးနိူင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးမယ်နော်.....
မမ မွေးနေ့မှာ အဲဒီ့ဝတ်စုံဝတ်တာလားဟင်...
အစားတွေလည်း ငတ်ကြီးကျ သွားတယ်ဗျိူ့...
နှပ်သမီးလေးရေ... ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးများစွာ ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါစေ.... မအားလို့ ခုမှ လာတာ... ကုန်ပီလားဟင်....
အမှန်တိုင်းကျောရရင်... အဲပုံတွေထက် နှပ်သမီး ပုံပဲ ပိုကြည့်ချင်ဒယ်.....
တပုံထဲ ကပ်ရှီးနှဲ..... ညားညားတင်ပါအေ.....
ပူးတေ လာစားတာ နောက်ကျသွားတယ်... ပန်းကန်တွေ သိမ်းဆည်းပေးဖို့ လာသွားပါတယ်... နတ်သမီးလေး ပျော်ရွှင်ပါစေနော်... မင်္ဂလာဆောင်ကျရင် ပူးတေ တကယ်လာမယ် ကြိုပြီး မေးလ်ဖြစ်ဖြစ်ပို့နော် ကြိုတင်စီစဉ်လို့ရအောင်လို့.... :)
ပူးတေမေးလ်က naughtycavia@gmail.com နော်
အခု မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်သော ခင်သောသူများနှင့် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကျင်းပနိုင်ပါစေနော်...
အိမ်ထောင်ကျပြီးရင်လဲ သားကောင်းသမီးရတနာလေးများရဲ့ မိခင်ကောင်းတယောက် ဖြစ်ပါစေလို့ ခုထဲက ကြိုဆုတောင်းလိုက်မယ်နော်.... :)
နန်းရဲ့ဘ၀တလျှောက်မှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏
ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး သာသာသာသနာအကျိုးကို
မွေးနေ့ဖိတ်ထားတာ မသိလိုက်ဘူး။ Belated happy birthday ပါနော်။ ပုံလေး လှလိုက်တာ ။ ဗမာပြည်ပြန်တုန်းက ရိုက်ခဲ့တာလား
ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ဖြစ်နေတာနဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ နောက်ကျနေခဲ့တယ်။ တော်ပါသေးရဲ့ စားစရာတွေ မကုန်သေးလို့။ နတ်သမီးလေးက တကယ်သဘောကောင်းသားဘဲ။ မွေးနေ့ပွဲတက်ရောက်တဲ့ သူတွေအတွက် ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စီမံထားတယ်။
မွေးနေ့ကစပြီး အရာအားလုံး ပြီးပြည့်စွာနဲ့ ဆက်လက်လျောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ မွေးနေ့အတွက် နောက်ကျဆုတောင်းလေး တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုဏီနောက်ကျမှလာလို့ စိတ်ဆိုးရင်လည်း....ထိပ်သာ လက်သီးနဲ့ ပိတ်ထိုးလိုက်ပါတော့ကွယ်........း)))
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေကြောင်း၊ လိုအင်များပြည်ဝဖို့ ကြိုးစာရာမှာ အစစအဆင်ပြေပါစေကြောင်း......ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်....။
(ကိုဏီမေးလ်ပို့ထားလိုက်မယ်....။ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကျရင်......။ ပေးထားတဲ့ကတိ မမေ့ပေါင်ဗျာ.....။း))